Ahoana ny atao raha te hiverina aminny olon-tiana taloha?
Nisy lehilahy iray izay, efa niaraka tamiko taloha ary efa nisaraka izahay. Mbola te
hiverina aminy anefa aho, nefa izy maditra sady manao sipa be.
Raha olona efa fantatra toetra fa tsy matotra sy tia vehivavy toy izany, inona no mbola mahatonga anao te hiaraka aminy ihany ? Vao mainka ianao ho ampijaliany satria fantany loatra fa tia azy, hiarahany dia isarahany isak’izay taitaitra izy, satria izany no mahafinaritra azy. Marina fa tia azy ianao, saingy ao anaty fitiavana, mila ampiasaina koa ny saina fa tsy ny fo fotsiny no atao miteny. Efa mazava be fa tsy hitondra anao mankaiza mihitsy ny fiarahanao aminy, noho izany, adinoy izy ary aza raharahiana akory. Raha tia anao izy dia tsy maintsy handadilady hanao izay hambaboana anao indray, rehefa hitany fa tsy mivaky loha aminy
Nisy lehilahy niaraka tamiko nandritra ny 4 volana dia nisaraka avy eo. Ny antony nisarahanay dia satria mbola miaraka amin’ny sipany taloha izy. Rehefa niresaka izahay dia nifamerina, satria nolazainy fa efa tsy miaraka intsony ry zareo. Fantatro anefa amin’izao fa mbola tsy nisaraka mihitsy ry zareo. Izy koa lasa misy toetra be, manambony tena sady mitady tambatambazana be. Mety mbola tia ahy ve izy ? Te hisaraka aho, nefa matahotra koa sao hanenina.
Ny olona tena tia dia manaja. Ny dikan’izany, tsy mampirafy. Ny olona tena tia koa dia tsy tia tena fa mihevitra ny mahasoa ny olon-tiany. Ny dikan’izany dia tsy mizahozaho sy manambony tena. Mila zavatra mifandanja ao anatin’ny fiainam-pitiavana matotra fa tsy misy ambony sy ambany, tsy misy ny tambatambazan-dava sy ny mpanambitamby lava, tsy misy ny manitsaka sy ny mandefitra, tsy misy ny mihafy sy ny mahazo vahana. Rehefa tsapanao fa tsy mampivelatra anao, fa vao mainka aza toa manetry anao ilay fiarahana, dia aza matahotra ny misaraka. Tsy maintsy misy foana ny sahaza anao, sao di any tsy hanana olona ho tiana sy hotiavina no mampitahotra anao. Raha mbola tsy tena tapa-kevitra ianao dia misitaha kely aloha aminy ary misehoa ho mangatsiatsiaka, mba hitsapanao ny tena halalin’ny fitiavany. Tsy maintsy hanambitamby anao sy hiezaka hanakaiky anao kokoa izy, raha tena tia anao.
Tena tiako ny olona miaraka amiko sady tia ahy. Tsy mitovy firazanana anefa izahay, ka tsy avelan’ny ray aman-dreniko mivady. Efa niteny taminy aho fa tsy anjara ny anay, nefa nilaza izy fa hamoy fo raha misaraka amiko. Tsy hitako izay atao.
Safidy ihany koa ny fitiavana fa tsy tokony horaisina ho anjara sy lahatra fotsiny. Ianao no hanambady ny olon-tianao, fa tsy ny ray aman-dreninao. Tokony anontanianao aloha ny tenanao, raha vonona ny hiatrika izay mitranga rehetra ao anatin’izany fifankatiavanareo izany, raha efa tena matotra tanteraka ny fonao sy ny sainao ary vonona hijoro ho tomponandraikitra amin’izay miseho rehetra. Raha ny tena marina manko, anatra sy torohevitra ihany no avy amin’ny ray aman-dreny, fa ny fanapahan-kevitra farany dia anao. Matoa izy ireo manisy fepetra, dia angamba mba mampiahiahy azy ireo ihany sao tsy mitovy ny fomba amam-panao, sao misy fomba fisainana tsy mifanaraka… ka mety hiteraka disadisa goavana eo aminareo roa any aoriana any. Saingy rehefa matoky ianao fa afaka mifanaraka tsara ianareo roa ary tsy misy na inona na inona atahoranao, dia anjaranao ny mandresy lahatra ireo ray aman-dreninao. Rehefa resy lahatra ny tenanao dia manana valin-teny azo entina mampitony ireo ray aman-dreninao ianao.
3 taona taorianny mariazinay no nanomboka tratrako mampirafy ny vadiko.
Aminizao efa 12 taona nivadiana izahay, fa mbola tratrako foana ihany izy. Rehefa tratra izy dia mifona kanefa mamerina
Misy fomba azo hamerena ny fadimbolana aminny laoniny ve ? Tovovavy 22 taona aho.
Mba toroy hevitra fa ny fadimbolako isaky ny roa volana foana vao mandeha. Inona no mahatonga izany ? Ahoana no hamerenana azy aminny laoniny ?
Ny fomba fipetraka ara-pahasalamana
Raha te ho ela velona ny olona iray dia ilaina ny mitandrin-tena aminny fiainany andavanandro.
Lehilahy manambady aho ary efa niteraka roa.
Enim-bolana anefa izao no niarahako tamina vehivavy mpiara-miasa aminay,
Tsy maintsy mifady sira ve ny bevohoka ?
Isanireo toromarika atoro ireo renim-pianakaviana rehefa mitondra vohoka ny fifadiana sira. Rehefa akaiky hiteraka
Masiaka loatra ny vadiko rehefa mibedy ny zanakay.
Indraindray aza, zavatra tsy misy dikany dia mampitabataba azy, na tsy amelany ny ankizy hivoaka ny trano.